Nsogbu na ụbọchị mbụ nke beta Pokémon GO na Japan | Androidsis
Pokémon GO beta malitere na Japan
Nyaahụ Niantic Labs akọrọ ụfọdụ nkọwa na ihuenyo site na Pokémon GO, otu n'ime egwuregwu vidio kachasị atụ anya nke afọ na nke ahụ ga-ewere ihe odide ndị a mara mma na eziokwu dịwanye elu ka ị wee nwee ike ichu nta ha na agbata obi gị ma ọ bụ mgbe ị gara ileta ụfọdụ ndị enyi gị.
Ewezuga nkọwa ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepe egwuregwu vidiyo a si Nintendo, otu izu gara aga anyị hụkwara vidiyo na egwuregwu. Taa anyị nwere ihe ịtụnanya ọzọ, nke a bụ na ọ nweelarị beta ule na-amalite site na Pokémon GO na Japan.
O yikwara ka ihe niile ọ na-aga nke ọma, ebe ọ bụ na maka ndị nwere ihu ọma ịnata ọkpụkpọ oku ka ha nwalee ngwa na Japan, egwuregwu ahụ anaghị arụ ọrụ otu o kwesiri enweghị ike ịtụba ya.
Ihe nwere ike ịbụ ihe nkịtị na beta beta, mana gịnị na-ewetara anyị oge na mbupute echere Pokémon GO na mpaghara ndị ọzọ. Ma ọ bụ site na akaụntụ Twitter nke onye ọrụ nwere ihu ọma ka a nabata ya, o kwudịrị na ọ nweghị onye nwere ike ịmalite Pokémon GO beta na ekwentị ha.
Ihe anyị nwere ike ime bụ ịbịaru nso vidiyo ebe nwa agbọghọ na-egosi nzọụkwụ mbụ na Pokémon GO na nhazi ihuenyo nke omume anyị. A na-ahụ etu ọdịdị ihu, ntutu ma ọ bụ anya anya si agbanwe, ma ọ bụdị ike ịgbanwe uwe.
Emepụtara avatar, a na-enweta ntụrụndụ nke maapụ ahụ ebe a na-etinye onye ọkpụkpọ ọkpụkpọ ya na obere map dị nkenke ka o nwekwara nsogbu. Egwuregwu vidio nke dabere na ndị na-egwu egwuregwu na ịchụ nta maka Pokémon, yabụ na anyị nwere olile anya na ha ga-edozi nsogbu ndị mbụ ahụ n'oge adịghị anya n'ihi na ọ dị ezigbo mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Pokémon Go » Pokémon GO beta malitere na Japan
Periscope na - enweta mmiri iyi 200 na afọ mbụ ya
Meizu M3 Rịba ama pụtara na AnTuTu na mgbawa Helio P10